Edza iyo nyowani Yakawedzera Yechokwadi yeiyo iOS 11 neaya maapplication | IPhone nhau
Luis Padilla | | IPhone maapplication, iOS 11
iOS 11 yave kuwanikwa kune wese munhu uye nayo yasvika yakanaka batch rezvishandiso izvo zvatove kushandisa zvinyorwa zvaro zvitsva, pakati peiyo Augmented Reality inomira munzira yakasarudzika. Yakapihwa muKeynote yekupedzisira munaJune yave iri imwe yemabheti makuru eApple neARKit uye inogamuchirwa kwazvo nevakagadziri avo vakave nemaapplication avo akagadzirira kubvira zuva zero yeiyo iOS 11 kuvhurwa.
Parizvino zvatove Tine mashoma mashoma ekushandisa muApp Store ayo anoshandisa Kuwedzera Kwechokwadi uye isu takakusarudzira mamwe ako Izvo zvimwe nekuda kwekubatsira kwavo, nekuda kwekugona kwavo kuvaraidza kana nekuda kwenzira yavanotidzidzisa nayo zvinogona kuitwa neiyi tekinoroji nyowani, isu tinofunga kuti vanokodzera kuyedza, uyezve vazhinji vacho vakasununguka.
Magicplan ndiyo yakapusa uye yakasununguka nzira yekugona kugadzira chirongwa chemba. Uine kamera yechigadzirwa chako uye maminetsi mashoma iwe uchakwanisa kudhirowa purani yeimba yako, shopu kana hofisi uye chengeta kana kuendesa kune ese marudzi emafomati, kusanganisira PDF kana JPG. Yemahara asi nekutenga kwakabatanidzwa unogona kuita chirongwa zvachose mahara.
Chishandiso chekuyera muhomwe yako nekutenda kune yako iPhone uye MeasureKit. Yaive imwe yeanokumbira kuratidzwa apo iOS 11 yakanga isati yaburitswa, uye ikozvino zvave kuwanikwa kune wese munhu ndeye-inofanirwa-kuve neapp yechero ani. Iwe unogona kuyera makamuri, zvinhu, kuverenga saizi yevanhu, isa mavhoriyamu pasi kuti uone kuti vanotaridzika sei ... mikana isingaperi yeshanduro yemahara iyi nekutenga kwakabatana.
iMetro (iRuler mune mimwe mitauro) iri chimwe chishandiso chekuita zviyero sekunge yaive mita. Unogona kuwana mhedzisiro mumasendimita kana masendimita (semuenzaniso kuyera tarisa). Mutengo wacho ndeye € 0,49 pasina kutenga kwakabatanidzwa.
Mutambo uyo unoshandisa kuwedzera kweAugmented Reality kunongedza kana kuswedera padyo nekutyisidzira kwatinofanira kuparadza. Iyo «zombie mhondi» matiri tine zvombo zvakasiyana zvekuvauraya kubva kuhondo yedu yeherikoputa, asi mairi patinenge tisina masimba ekudzora kuti tifambe, asi isu tichafanira kufamba neiyo iPhone kunongedza, enda kure kana kuswedera padyo nezvinangwa zvedu, sekunge zvakaiswa patafura. Chaizvoizvo chakakurudzirwa uye chemahara.
Atlas yeHuman Anatomy chikumbiro chakagadzirirwa kunyanya kune vesaenzi vesaenzi vehutano vane mifananidzo inoyevedza yemuviri wemunhu uye mukana wekuzvivhara muzvikamu. Iye zvino iwe zvakare une mukana we isa iyo anatomical modhi pamubhedha, tafura, kana pasi, moenda kunoongorora nhengo dzakasiyana dzinoumba muviri wemunhu.
Uku ndiko kusarudzwa kwekutanga kweAugmented Reality kunyorera atakakusarudzira iwe. Kana paine chero aripo uye aunofunga kuti anofanira kunge ari mune urwu runyorwa, isu takamirira mipiro yako mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Edza iyo nyowani Yakawedzera Yechokwadi yeiyo iOS 11 neaya maapplication
Kuwana multitasking kubva ku 3D Kubata kunodzoka neIOS 11